Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Kabaha Sandals Fasaxyada Loo Dhan Yahay: Dhammaan Qoyska!
Jebinta Wararka Caalamka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • Wararka Raaxada • News • jiga • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Turks iyo Caicos Breaking News • Wararka kala duwan
Qoysasku waxay ku faraxsan yihiin Sandals -ka!
Goobaha Sandals-ku waxay la mid noqdeen sawirka lammaane faraxsan oo ku raaxaysanaya fasax jaceyl iyo walwal la'aan ah oo gabi ahaanba wax walba la daryeelo maxaa yeelay runtii waa wax loo dhan yahay. Laakiin ka warran haddii aad reer tahay? Xeebaha Sandals, qoyska oo dhan waa la soo dhaweynayaa!
Fasaxyada Xeebaha Raaxada Ku Jira waxaa ka mid ah wax kasta oo qof walba u badan.
Halkaan waxaa ku yaal dhul iyo cayaar kasta oo qorraxda hoosteeda ah, laga bilaabo mar kasta oo la cuno hilibka cuntada leh illaa 21 maqaayadood oo khaas ah, illaa waxqabadyo iyo adeegyo da 'walba leh, iyo qolal raaxo leh oo qoyska u wanaagsan.
Kani waa fasaxa qoyska oo ay ku jiraan isugeyn dheeraad ah, kala doorasho badan, iyo siyaabo badan oo aad waqti ugu wada raaxaysan kartaan.
Keenista Qof Kasta - Lammaanaha, Qoysaska, Saaxiibbada ugu Wanaagsan, Kooxaha, iyo Aroosyada
Baxitaan fiican ayaa sugaya Xeebaha loo dhan yahay ee Turks & Caicos iyo Jamaica. Ku cayaaro xeebaha qaaliga ah, ciid-cad leh oo ay salaaxaan badaha cad-cad. Ku qaad fasaxa qoyska qolal raaxo leh iyo suuliyo. Ku raaxayso hawlo aad u xiiso badan oo madadaalo leh oo loogu talagalay carruurta da 'kasta leh. Dhammaan Xeebaha loo dhan yahay waxaa ka mid ah jardiinooyinka biyaha Pirates Island, jilayaasha Sesame street®, xeryaha carruurta, iyo goob lagu caweeyo oo xiiso leh oo loogu talagalay dhallinyarada. Run ahaantii, Xeebaha xeebaha loo dhan yahay ee Jamaica iyo Turks & Caicos waxay ballan-qaadayaan baakadaha fasaxa qoyska ee lama-ilaawaanka ah ee ka hooseeya qorraxda Kariibiyaanka. Qorshaynta aroos? Xeebaha Xeebaha waxay bixiyaan aroosyo la yaab leh oo loo socdo iyo baakadaha malabka.
Ha u qaadan eraygayaga
Ilaha macluumaadka ugu fiican ayaa ku jira dib u eegista martida. Akhri waxay martidaani ka yiraahdeen qiyaastii bil ka hor TripAdvisor fasaxyadooda ku yaal xeebta xeebaha.
Xeebaha Turks & Caicos ee Providenciales
Fasax Caribbean ah oo ku yaal jasiirad run ah oo raaxo leh - ayaa loogu codeeyay #2 Dalxiiska Kariibiyaanka ee Qoysaska TripAdvisor
L1279DGkathyf: “Aaday macaan 16! Waxay ahayd cajiib! Baararka iyo shaqaalaha sugitaanka, soo dhaweynta - dhammaantood waa yaab! Makhaayadaha waxay ahaayeen kuwo aad u fiican! Tashana gaar ahaan Neptune ayaa ka sarraysay oo ka sarraysay !!!! Dhab ahaantii way soo noqon lahayd! ”
Xeebaha Negril ee Jamaica
Waxay ku taallaa xeebta caanka ah ee Negril ee 7-Mile Beach-Loo Codeeyay #1 Dalxiiska Kariibiyaanka ee Qoysaska ee TripAdvisor
Voyage35019172706: "Waxaan joogitaan cajiib ah ku leenahay Xeebaha. Qolkeenu waa qurux. Labadaydu way jecel yihiin oo waxay sameeyeen saaxiibo badan. Ricardo runtii wuxuu nagu daryeelayay baarka iyo Adrian barkadda weyn. Cuntada ayaa aad u fiican. Xaqiiqdii waxaan ku laaban doonnaa janada jasiiraddan. ”
Xeebaha Ocho Rios ee Jamaica
Socdaalka xeebta ee reer Jamaica - Waxaa loo codeeyay Top 5 Caribbean Resort for Families by TripAdvisor
kelizabeth_13: "WAX WALBA waxay ahayd mid gaar ah. Cuntada, dalxiisyada, qolalka, & shaqaalaha !! Daacadnimo, waxaan u malaynayaa in shaqaaluhu waqtigaaga ka dhigayaan 1000x mid ka fiican. Waxay yihiin kuwo saaxiibtinimo leh, soo dhaweyn leh, guud ahaanna had iyo jeer hubi in lagu daryeelo. Kooxda dukaanka quusitaanka ayaa la yaab leh. Glenroy, Oshan, Sherief, Sheldon, Marlon, Ackeem, Triston, & Shan had iyo jeer waxay ahaayeen kuwo aad u xiiso iyo soo dhaweyn leh. Glenroy wuxuu ka dhigay quusitaan kasta mid siman, madadaalo iyo badbaado leh! Xaqiiqdii waxay ahayd muujinta safarkayga. Duufaanta doonnida quraaradda ah ayaa iyaduna waajib ah. Ma sugi karo inaan mar kale ballansado !! 10/10 safarkan. ”
Wax walba Runtii waa lagu daray
Xeebaha, wax walba oo la malayn karo ayaa ku jira. Looma baahna boorsooyin, kaliya ku tuur daryeelladaada dabaysha kulaylaha. Sandals-ku wuxuu qeexayaa dhammaan loo dhan yahay iyadoo lagu darayo waxaas oo dhan:
Makhaayadaha & Baararka
Seerayaasha Biyaha ee Jasiiradda Pirates
Motorozed Biyaha Sports
Golf & Ciyaaraha Dhulka
Xeebaha ugu Fiican Kariibiyaanka
Habeenka & Madadaalada
Ruuxa Qadarka ah
Robert Mondavi Twin Oaks® khamriga
Aroosyada iyo Malabka
Wifi Bilaash ah